अन्यथा तपाईपनि भ्रष्टाचारीकै कित्तामा :: NepalPlus
-गोपाल रेग्मी / स्पेन
बिदेश बसाइको लामो अवधिमा धेरै देशका बिदेशीहरुसँग अन्तरसम्वाद गर्ने अवसर जुरेको छ मलाई । अझ बिगत दुई वर्ष यता रुस्टुरेन्ट ब्यबसाय शुरू गरेदेखि लगभग तिन चार दर्जन बिदेशीलाई दैनिक खाना खुवाउने गरिन्छ । उनीहरुको त्यो खाना खाने छोटो समयमा अधिकतम नेपालको बारेमा जानकारी दिइेर नेपाललाई प्रवर्धन गर्ने कोशिश गर्ने गरेको छु । अधिकांश भेटिएका बिदेशीहरु मध्ये धेरैलाई नेपाल भन्ने थाहा नहुने रहेछ । थाहा भएका मध्ये प्रायले नेपाल गरीव देश भनेर बुझ्ने रहेछन् । यसले मेरो मन अमिलो हुन्छ । कसो गर्ने त ?
नेपालका राम्रा अनि गौरव गर्न मिल्ने खालका विशयहरु राखेर जीवनमा एकचोटी नेपाल भ्रमण गर्नु अत्यन्त जरूरी छ भन्ने दिमागमा भरेर पठाउने कोशीश गर्दछु । अझ हाँसो ठटेउली शैलीमा सुनाउने गर्छु ‘जीवनमा एक पटक नेपाल जो जाँदैन उसको जीवन अधुरो हुन्छ । नेपाल नचिन्नेलाई म यस्तो कुरा सुनाउन छुटाउँदिन ।
प्राकृतिक साधन र श्रोतले भरिपूर्ण हाम्रो देश गरीब किन भयो होला ? सामान्य तरिकाले सबैले बुझ्ने भाषामा भनौं । जसले जीवनभर कुनै जागिर खाएन । कुनै पेशा अँगालेन । ब्यवशाय गरेन । पुर्खेउली सम्पति भनुँभने अस्तिसम्म उ सडकमा हत्तीछाप पड्काएर हिँड्थ्यो । त्यस्ता प्रकृतिका अधिकांश ९० प्रतिशत भन्दा धेरै राजनीति, समाजसेवा गर्ने तपाई हाम्रा पार्टीका नेताहरुको राजधानीमा महल कसरी सम्भव भयो होला ? तपाई हामी वालीक भएदेखि निरन्तर काममा घोटीँदा समेत कम्तिमा परिवारको अतिरिक्त खर्च बाहेक अलिकति ठुलो रोग लाग्यो भने सडकमा चन्दा उठाउ अभियान चलाउनुपर्ने अवस्था छ । नत्र उपचार नपाएर मृत्युबरण गर्नुपर्छ ।
केहि समय अघि नेकपा(नेकपा) का केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ नेउपानेले सार्वजनिक पदधारण गरेका ब्यक्ति तथा राजनैतिक पार्टीका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गरौं भन्ने बिशय उठाए । उनले हचुवा र लहडमा आफू लोकप्रिय हुनका लागि मात्र त उठाएनन् होला । यही प्रश्न गर्दा गोकुल बास्कोटाले ‘कसैको उजुरी परे अदालतले हेर्ला । तर त्यसै कसैले भन्दैमा,कराउँदैमा छानबीन हँदैन’ भनेर हेपिदिए । यो विषयलाई उडाइदिए ।
काँग्रेसले ७० बर्ष सम्म सत्ता चलाउँदा कति लुट्यो होला ? अनुमान गरिसाध्य छैन । तिनका एकाध नेता बाहेक अधिकांश करोडपति अरबपति छन । जत्ति धेरै ठुलो स्वरमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दीन’ भन्थ्यो उहि भयङ्कर भ्रष्ट्राचारी भएर निस्कियो । गोकुल वास्कोटालाई लागेको कमीशन काण्डले उनको पद लग्यो । तर यो काण्ड डेढ बर्ष अगाडीनै प्रम ओली ज्युलाई जानकारी रहेछ । उनि तिन दिन अगाडी भन्दै थिए ‘सारा मन्त्रि भन्दा गोकुल उत्कृष्ट,दक्ष छन ।’ ‘भ्रष्ट्राचारीको मुखपनि हेर्दिन’ भन्थे । तर भ्रष्ट्राचारीको संरक्षक देखिए ।
यी तमाम बिषयको बिरोधी हुनुहुन्छ तपाई । भ्रष्टाचार बिरोधी हुनुहुन्छ तपाई । र रिजल्टमा देश धनी भएको, बिकास भएको देख्न चाहनुहुन्छ । तर त्यो भन्दापनि बिरोधाभास कुरा तपाई काँग्रेस,नेकपा (नेकपा) पार्टीका लागि ज्यान दिन तयार हुनुहुन्छ । ति पार्टीका नेताका पिछलग्गु यस अर्थमा हुनुहुन्छ । हो यस्तो बिरोधाभासपूर्ण तपाइको चरित्रले अन्तत्वगत्वा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत र नीतिगत रुपमा बढावा दिएकै छ ।
सामान्य यी दुई चार जना पात्र जो कागज राम्रोसँग मिलाउन नजानेर, ढंग नपुर्याएर, आफुले बिश्वास गरेको पात्रले गोपनीयता भंग गरीदिएर, ब्यक्तिगत असावधानीले गर्दा वाग्ले, गुप्ता, जोशी, गच्छेदार, बास्कोटा आदि इत्यादिहरु मात्र जेल जानुपरेको हो । वा मुद्दा खेप्नु, पद त्याग्नु परेको हो । यस्ता थोरै नेता जेल गएर, उनीहरुको राजनीति करियरमा धक्का लाग्दैमा देश बन्ने वाला छैन । जबसम्म तपाई नेतासंग फोटो खिच्न र खादा पहिर्याउन छोडेर ‘तपाइको सम्पत्तिको श्रोत केहो ? तपाई कसरी यत्ति पैसा कमाउने हुनुभयो र हामी तमाम जनता अनि देश कसरी सधै गरीव भयौं ?’ भनि कम्तिमा प्रश्न गर्नुहुन्न अन्तत तपाईपनि त्यही कित्तामा पर्नु हुन्छ । प्रस्ट भन्नुपर्दा भ्रष्ट्राचारीको कित्तामा हुनुहुन्छ । तपाई अब पार्टी र नेता प्रधान होइन । देश र आम जनता प्रेमी हुन आजैबाट प्रयत्न गर्नु जरूरी छ ।
यदि यो दिशामा अगाडी नबढ्ने हो भने त तपाईपनि सधैं समाज सेवा वा राजनीति गरिरहने, नियमित खटिरहने । तर नेता धनी भैरहने हुन्छ । देश झन झन गरीव, आम जनता वा तपाइकै स्थिति अझै कठिन बन्दै जाने निश्चित छ । तपाईले जस्तो निति लिनुहुन्छ तपाईलाई त्यस्तै बाटोतिर लैजान्छ । सही बाटो पक्रनुहुन्छ । नभएको चीज प्राप्त हुन्छ । गलत बाटो लिनुहुन्छ भने भएकोपनि ग़ुम्छ ।